Ezona ncwadi zilungileyo zengqondo, izihloko ozifunayo kwilayibrari yakho | Uncwadi lwangoku
Ukukhangela kweyona ncwadi ibalaseleyo yezengqondo yenye yezona zifunwa kakhulu phakathi kwabafundi abathetha iSpanish. Emva kwayo yonke loo nto, imalunga nesayensi yengqondo; uqeqesho olufunyenwe kwifilosofi kunye nemvelaphi yayo esesikweni eyaqala ngenkulungwane ye-XNUMX. Ukongeza, le yangoku beza kunye ne-empiricism (ulwazi ngamava), ekhokelela kufundo lokuziphatha komntu.
Ngenxa yoko-xa kuthelekiswa nezinye iinzululwazi zentlalo-yindawo ethe kratya yolwazi (ngaphandle kokuphazamisa i-iota yokubaluleka). Kule mihla, isayikholoji kubandakanya izinto ezingaphantsi kweenkalo ezithile (ezonyango, ezentlalo kunye nokuqonda, phakathi kwabanye), eziye zahlalutywa ngobuchule kwiincwadi ezichazwe kule mihlathi ilandelayo.
1 Ukufuna komntu ngeNjongo (1946), nguViktor Frankl
1.1 Impikiswano kunye nolwakhiwo
2 Ubukrelekrele boMoya (1995), nguDaniel Goleman
2.2 Ulwakhiwo, injongo kunye nolwimi
3 Ukuthetha ngokwengqondo (2016), nguAdrián Triglia, uBertrand Regader noJonathan García-Allen
3.2 Ubungqongqo kwezenzululwazi kunye nolwimi
3.2.1 Iinjongo eziphindwe kabini zababhali
4 Ezinye iincwadi ezinconywayo zengqondo
Ukufuna Komntu Ngentsingiselo (Ngo-1946), nguViktor Frankl
Yeyona ncwadi ithengwa kakhulu eAmazon kudidi lwengqondo, ngokuvuma ngazwi linye phakathi kweengcali kunye noluntu ngokubanzi. Hayi ilize iguqulelwe kwiilwimi ezingaphezulu kwamashumi amahlanu kwaye ifuthe layo elikhulu liyaqatshelwa (ngakumbi eMelika). Konke oku kubulelwe kubungqina obungqongqo nethemba obuchazwe ngumbhali malunga nendoda ejongene namava agqithisileyo.
Impikiswano kunye nolwakhiwo
Ugqirha we Psychology V. Frankl wahlulahlula incwadi yakhe ngezigaba ezithathu. Bacwangciswe ngokwamava abo kwinkampu yoxinaniso nazi kunye nembono esondeleyo yengqondo yomntu. Kwinxalenye yokuqala kuqokelelwa uloyiko yokufika ebaleni kunye ukothuka kwabaninzi xa bephathwa gadalala ngazo zonke iintlobo.
Ke umceli mngeni kwi-psyche ukwimo yesigqibo phakathi kokuzibulala okanye ukuxhathisa kude kube sekupheleni, nokuba kwenzeka ntoni. UKUYAimeko enjalo ivela kwisiseko esingahlambulukanga njengoko kungenakufaneka: "umntu ngumntu onokuziqhelanisa nantoni na."
Emva koko, umfundi ufumana inqanaba lesibini elibhekisa kubomi babo bemihla ngemihla ebaleni. Ukwenza oku, ngamabali anzima abonisa ukufa kweemvakalelo. Kwangokunjalo, eli candelo libonisa umnqweno wokudlulela ekhaya kunye nokungabinakunceda okubangelwe kukwahlukana kukabani.
Phantsi kwale meko iphikisanayo yokulahleka komntu, Amava acinezelweyo ayaliwe ngokufanelekileyo kwindawo eyoyikekayo ehlala ngoku. Kule meko, umbhali uvakalisa: «... ukunyanyeka, uvelwano kunye noloyiko yayiziimvakalelo umbukeli wethu angasaziva».
Isigaba sesithathu-esona sengqondo-sijongana nemeko yezifundo emva kwenkululeko. Apha, umbhali uzama ukubamba uluvo lwabo bahlanguliweyo, abathi babandezeleke ngenxa yokungaziphathi ngenxa yezinto abazenzileyo. Abasindileyo baba ngabantu abahluke kakhulu, bafumana olunye uloyiko, ukubandezeleka, inkululeko kunye noxanduva.
Indoda Efuna ...
Zobulumko (1995), nguDaniel Goleman
Le ncwadi yapapashwa phakathi kwiminyaka yee-90 yenza umbhali wayo waduma kwihlabathi liphela ngokubonisa inoveli malunga nembono yesiko lobukrelekrele. Isiphakamiso sikaGoleman kukunika indawo ekhethekileyo kwiimvakalelo zomntu ngaphakathi kommandla wengqondo.. Yiyo loo nto, ukufuna kwakhe uxolelwaniso phakathi kobukrelekrele kunye Ndibonwabisiles ngokufunda kwengqondo kunye nemeko yezentlalo.
Ukufaka isicelo sobukrelekrele bemvakalelo kuyimfuneko ukufuna ibhalansi esekwe kwingcinga esengqiqweni edityaniswe nokubaluleka (kweemvakalelo) ngokubaluleka kweemvakalelo. Ngokunjalo, umbhali ubeka ukuba ayisiyiyo malunga nokwala okanye ukuzama ukuphelisa iimvakalelo zabantu.
Okwangoku, eyona nto ibalulekileyo kukuqonda iimvakalelo ngaphakathi kweendlela ezahlukeneyo zomntu (ubuqu, usapho kunye nobungcali). Kubonwe ngoluhlobo, Ingcamango kaGoleman icacisa ukubaluleka kokuzazi ngakumbi nangcono, ukuze ufumane umgangatho wobomi obungcono.
Ulwakhiwo, injongo kunye nolwimi
Owayesakuba ngunjingalwazi Iiprojekthi zeHarvard izakhono ezihlanu ezintle ukukhula ngobukrelekrele bemvakalelo. Ezi zezi: ukuzazi, ulawulo lweemvakalelo, inkuthazo yangaphakathi, uvelwano kunye nokuhlala. Apho kuqondwa into entsha yobukrelekrele- ayisiyiyo kuphela- kunye nokuqwalaselwa kwecala lomntu ngamnye nelichaphazelekayo njengesigqibo.
Ngenxa yoko, enye indlela inikezelwa kumxholo wokuhlala kunye nokuhlala kunye naye kunye nabanye. Okokugqibela, le ncwadi inokuqondwa ngokwendlela ekhethekileyo yengqondo. Ngelixa ulwimi olusetyenzisiweyo luququzelela ukuqonda kuluntu ngokubanzi.
Ubukrelekrele bemvakalelo ...
Ukuthetha ngokwengqondo (2016), nguAdrián Triglia, uBertrand Regader noJonathan García-Allen
Ukungena kwihlabathi leengqondo, indlela ecacileyo ibalulekile, kodwa kude neenkolelo okanye iikhonsepthi ezinzima. Esi sisindululo sababhali Ukuthetha ngokwengqondo, upapasho olunesishwankathelo esibanzi seengqondo eziqulethe ukubuyela umva ukusuka kwimvelaphi yayo ukuza kuthi ga ngoku.
Ke ngoko sisixhobo esifanelekileyo sokufunda kwaye, kwangaxeshanye, ivumela ukufunda ngokudlala okanye ngokungacwangciswanga. Ngokukwanjalo, ukukhula kwesicatshulwa kuphakamisa imibuzo enje: iyintoni Psychology? okanye isayikholoji sisayensi kwisimo esingqongqo sekota? Ngezi zizathu, yincwadi efanelekileyo ukuba uqale ngolwazi lolu qeqesho.
Ubungqongqo kwezenzululwazi kunye nolwimi
Ababhali bayakwazi ukugcina ubungqongqo obufunekayo besayensi kunye nolwimi ekulula ukuluqonda kuzo zonke iintlobo zabafundi. Ngokulinganayo, Iinkcazo ezenziwayo zichaza ngobuchule izikolo ezahlukeneyo zolu qeqesho kunye neengcinga zayo eziphambili kunye nenkqubela phambili enomdla kunye neziphumo.
Ngakolunye uhlangothi, Incwadi ibandakanya indaleko ye-etymological yamagama athile. Kodwa ayisiyongqokelela yamagama kunye neengcinga kuphela, kuba kwisicatshulwa sonke ababhali bavakalisa izimvo zabo ngalo mbandela. Olunye lolu luvo lukhatshwa luhlalutyo lwabo. yeekhonsepthi ezisisiseko zengqondo.
Iinjongo eziphindwe kabini zababhali
Ukuthetha ngokwengqondo iphanda ubudlelwane obungeneyo phakathi kokuziphatha komntu nokusebenza kwengqondo njengeyunithi yebhayoloji kunye neengqondo. Ke, eyona nto ibalulekileyo kubabhali kukufumana umxube onqabileyo kwiincwadi zesayensiIinjongo zokufundisa nokusasaza ngoxolo.
Ezinye iincwadi ezinconywayo zengqondo
Ukuthobela igunya (Ngo-1974), nguStanley Milgram.
Iindawo zakho ezimbi (1976) nguWayne Dyer.
Thanda okanye uxhomekeke (1999), nguWalter Riso.
Iziphumo zeLusifa (2007), nguPhillip Zimbardo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi ezilungileyo zengqondo
Ingoma kaMío Cid
ULuis Castañeda. Udliwanondlebe ne-2020 Amazon Literary Award Winner